Fiantohana sy fiarovana… vahoaka | NewsMada
Fiantohana sy fiarovana… vahoaka
Imasoan’ny fitondrana amin’izao ny famerenana ny hasin’ny fanjakana, ny famelomana ny fifampitokisana eo amin’ny vahoaka sy ny fanjakana. Ao anatin’ny hoe tany sy fanjakana tan-dalàna izay. Aiza ho aiza?
Maso miara-mahita ny rehetra, sofi-miara-mandre. Misy ny fiovana sy ny fanovana? Sanatria, mbola misy ve, ohatra, ny mpitondra ambony tsy mahalala afa-tsy ny faritra niaviany? Na ny antokony, na ny fikambanany…
Amin’izany, miseholany ho azy ny fisian’ny hoe zanak’Ikalahafa, ny tany lavitra fanjakana, ny fampandrosoana mitanila… Miara-dalana eo ny fahatsiarovan-tena na ny fiforetana anaty hoe voailikilika, atao ankilabao.
Tsy mahagaga raha mety misy, ohatra, sanatria, ny fanjakazakan’ny solontenam-panjakana, na ny mpitandro filaminana, na ny olom-boafidy… Manahirana ho azy ny fanajana sy ny fampiharan-dalàna, mahatonga tsy fifampitokisana.
Tsy vitan’izany, anisan’ny fototry ny tsy fifampitokisana mahavery hasina ny fanjakana ny tsy fahalalan’ny vahoaka ifotony ny zony aman’adidiny: tsy fahalalana ny lalàna, ny fombafomba ara-panjakana…
Mahazo vahana ho azy ny tsimatimanota, na ny olom-boatendry na ny olom-boafidy. Firifiry, ohatra, ny olom-pirenena matahotra miditra biraom-panjakana? Indrindra ny hoe fitsarana, tobi-miaramila na zandary, ohatra.
Toy ny hoe fanasaziana ihany ny lalàna fa tsy natao handamina ny fiarahamonina mbamin’ny asany, ohatra, ary hiaro ny olom-pirenena amin’ny fisitrahana sy ny fizakana izay zo sy andraikitra amin’ny maha olona.
Na amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana, ohatra, izay lalàna izay, na vondrombahoaka itsinjaram-pahefana, na asa, na fananan-tany, na fiarovana tantolo iainana, na fitsaboana, na ny fampianarana, na famatsiana angovo…
Mba firy ny tena mahalala ny lalàna mifehy izany rehetra izany? Na izay mampahafantatra sy manazava… Tsy misy fiantohana sy ny fiarovana ny vahoaka amin’izay maharary azy, raha mila famonjena sy fanampiana.
Izay ny ilana ny famerenana ny hasin’ny fanjakana amin’ny lazainy sy ataony? Ho amin’ny fifampitokisana tanteraka…